Audius waa barxad socodsiin muusig oo awood ku shaqeeya oo xannibaya | Abuurista khadka tooska ah
Audius waa adeeg cusub oo bilaash ah, xayeysiis ku saleysan xannibaadda muusikada
Halkan ma istaagi kartid waana Audius mid ka mid ah oo noqonaya beddelka ugu muhiimsan ee loo yaqaan 'Soundcloud', adeegga qulqulka muusikada ee dhammaan noocyada farshaxanada iyo in waayadan dambe waaya-aragnimadiisa lagu xumeynayo dhibaatooyinka dhammaan noocyada kala duwan.
In kasta oo runtii loo maro khadadkaas waa inaad halkii ay ahayd arinta xannibaadda. Haddii Soundcloud ay dhibaato u keenayso wax, waa sababta oo ah arrinta shatiyada iyo dalabyada ay Soundcloud si buuxda ugu lug leedahay.
Audius waa hoorto muusiko bilaash ah iyo adeeg martigalin halka aad joogtid waxaa na ilaalin doona DJ-yada caanka ah. Guud ahaan, waxay heleen qiyaastii 5,5 milyan oo doolar oo maalgashi ah si isticmaale kasta uu u soo dejisan karo muusikadooda bilaash.
Laakiin xaqiiqda weyn ee ka dambeysa Audius ayaa ah inaysan marti gelinayn muusikada la soo raray, laakiin in loo qaybiyo dhammaan noodhadhka si madax-bannaan u shaqeeya iyo in adeegso tikniyoolajiyadda xannibaadda. Si kale haddii loo dhigo, mahadsanid tiknoolajiyaddan, waa laga ilaalin karaa dalabyada iyo cadaadiska sumadaha diiwaannada.
Taasi waa, waad isticmaali kartaa adeegga bilaash ah inaad ku dhageysato muusig tayo leh 320kbps waana taasi kufiican tayada maqalka ugufiican. Laakiin wax walba way is beddeli doonaan marka 2020 bilowgu u oggolaado farshaxan-yahannada inay dalbadaan daawashada xayeysiinta ama dhowr yuuro si ay ugu bixiyaan rukunka Audius.
Madal aad umuuqata oo naga caawin doonta inaan lasocno maalmahaas markaan naqshadeynayno barnaamijyada aan ugu jecel nahay. Marka waan awoodnaa kala beddel Spotify iyo adeeggan taas oo aan ku ogaan karno farshaxanno cusub iyo sidoo kale soo saarista taranka waddooyinka djs ugu caansan. Madal cusub oo aan albaabada u fureyno. Ha moogaan muxuu noqon doonaa Photoshop-ka maqalka Adobe.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Audius waa adeeg cusub oo bilaash ah, xayeysiis ku saleysan xannibaadda muusikada
Qaar ka mid ah sawirada taageerayaasha Joker, filimka Joaquin Phoenix